Ngwarira simba rekuudza: mubhedha wako uri munzvimbo chaipo here? - AFRIKHEPRI
Ngwarira simba re telluric: ndiro mubhedha wako munzvimbo yakarurama here?
Ndiani ainzi Betty Shabazz?
Kukosha kwenzvimbo yemubhedha wako
Iwo makuru ekuudza simba, panguva yekutanga kwezvakanyanya kukosha uye zvinowanzoonekwa zvichikuvadza zvinokuvadza pane zvipenyu (kunyanya kuvanhu, zvinomera nemhuka), senge malaise nezvirwere, ndeizvi:
- Hartmann Network,
- Iyo yakavanzika matsime emvura,
- The Radon.
MuChina, munguva yekare, zvakarambidzwa zvachose kuvaka chivako chiri pamusoro pepasi pevhu. Vashandi vechiChinese vaiziva kuti rukova, mukufamba kwaro, rwaizobudisa simba rinokosha revagari veimba yakadaro kune kunze kweimba uye saizvozvo, vaizobva vashandura simba ravo. .
Izvozvi vashandi vakatsigira rudzi rwechirwere chekudzivirira, sezvakaitawo Druids zvakare se 'sourciers' avo vaiziva mazai e telluric uye mazaya. Vaiziva zvakakwana kushamwaridzana pakati pezuva, kufamba kwemhepo uye magnetism enyika.
Pedyo neimba, sezvo 1880, tsvakurudzo nesayenzi yakawanikwa yaPaul naJacques Curie pane piezoelectricity ye quartz, yakabvumirwa kugadzira detector, inonzwisisika neaspicm waves, kuti ione kuvapo kwemazana aya ane simba masimba telluric.
Zvadaro, kunyange kusvika pedyo nenguva yedu, kushandiswa kwekamberi yeGeiger kwaiva kunyanya kukwanisa kutarisa miviri ye telluric.
Astrophysicists nokuda kwechikamu chavo vakaratidza kuti nyeredzi dzose, kusanganisira pasi rechokwadi, dzinoshambidzwa zvachose nemunda wezuva rinoti "COSMIC" inovapa simba nehupenyu. Iyi simba inotangira kubva kumatenga kusvika kumativi enyika uye inobata iyo, sezvinoitawo zororo rose, nerima rayo.
Nekudaro, pasi, kuburikidza naro pari payo pachayo, rinogadzira mazhenje kubva kubva mukati rayo kuenda kune zvisikwa.
Saka tinonzwisisa kuti yepasi pose mwaranzi zvizvarwa uye ascendants telluric mwaranzi, chiito zvose nokusiya chiratidzo chaicho zvose anogara pamusoro pemvura yose, pamwe Chokwadi ane chaihwo kukanganisa physiology kwevanhu.
Kubatanidzwa kwezvinhu izvi zviviri zvichikwira uye zvichidzika zvinokonzera kusunungura uye kupindira pasi rose pasi uye kusvika kune zvakakwirira zvakakwirira zvepasi.
Aya mazairo, iwe unofungidzira zvakanaka, une ruzivo rwekupinda zvachose zvinhu zvose, nyore nyore kupfuura ziso rinogona kubvumira kuona.
Nei kuvapo kwemafirizi emvura pasi penzvimbo kuchikuvadza?
Chokutanga pane zvose, kwete zvose zvitubu zvemvura zvinowanzova zvinokuvadza. Maererano nezvimwe zvidzidzo, uye zvakare zvichienderana nenzvimbo yezvidzidzo izvi, kumabvazuva-kumadokero nzizi dzakaonekwa sechinhu chinokuvadza kudarika kuchamhembe-kumaodzanyemba.
Kana mvura iyerere iri anowedzera kupomerwa rurefu radioactivity, kana zvakasvibiswa kwemakemikari kana makemikari tsvina manyowa, nemwaranzi "pathogenic" anova gudzazwi chaiye anogona kuchinja pakuenzanisa kana utano vagari vanogara pamusoro payo.
Ko nezve kuvapo kwemadziro asingaoneki anonzi Hartmann network?
Pakutanga (chete isati hondo yenyika wokupedzisira), raiva chiremba Peyre kuti tinofanira kuwanikwa nokuvapo telluric mwaranzi akaparadzirwa kutwasuka mavanga, yakafanana uye perpendicular kune rinobva Meridian, achiumba pamusoro pemvura Earth ibhokisi rakakura rinobva kumwoyo wepasi.
Zvadaro muC1952, yakanga iri yaCharry's turn to find the state of the same system referring to a quadrangular structure formed by invisible walls from 3,50 to 16 meters.
Pakupedzisira, akakurumbira Dr. Hartmann, ane ruzivo rwakakwana kuti ave nani akachengetwa nhamba yezvinyorwa, akacherechedza kuti pane dzimwe nzvimbo dzakanyanya, utano hwakakwana hwehuwandu hwaive hwakanyatsopindirana zvakananga nehuwandu hwehuwandu hwevanhu. nzvimbo idzi.
Uye zvakamuteerera iye pfungwa yekugadzira kufanana pakati pechirwere chechimwe chimiro chomunhu maererano nenzvimbo chaiyo iyo inorarama, yekurara kana kushanda.
Somuenzaniso, zvakaitika kwaari kuti kana iri muimba yakawanda, uye vanhu vakasiyana-siyana vanovata pamubhedha vachinyatsokonzera nzvimbo imwechete paimba imwe neimwe, uyezve, vachibatwa nekenza imwechete inobata zvakananga chimiro chakafanana, iye Zvinopedzisira zvichiti kunze kwekuti kusanzwisisika kwakasiyana hakukwanisi kuve nekuguma kwechiitiko.
Zvaakawana zvakanyanya kutaura nezvekuvapo kwekusingaoneki kwemazwi ekuyerera avo avo vaifungidzika vaifungidzirwa kuti vasaisa simba revanhu vachigara munzvimbo imwe chete, somuenzaniso, nzvimbo yemubhedha wavo.
Iri bhokisi, rinofukidza nzvimbo yose yepasi redu, rinenge riripo risingaverengeki rusvingo rusingaoneki kubva pakati penyika uye zvose zvinotungamirirwa kune zvisikwa. Izvi zvingadai zvakagadzirisa zviyero izvo mazhenje akafanana (masvingo) aizoyera 21 cm muhupamhi. Aya masvingo asingaonekwi anotevera mazano ekugadzirwa kwenyika maererano nematanda epasi.
Kukosha kwenzvimbo yemubhedha wako, nzvimbo yekushandira kana yechigaro chako chaunoda
Murume ari mune hupfumi hwakawanda akaedza kuziva nharaunda dzenzvimbo yacho uye kudzidza zvayo maitiro asati agadzira denga rake kana imba yake. Shamwari, kuti Chiesa vavaki kuti yakatanga muna West, kutsanangura chaizvo zviito zvezvivako pachinhu zvinhu cardinaux.En Asia Feng Shui waitaura zvaifanira kuitwa chaizvo chaizvo nzira miitiro yakadaro chokuita netsika tsika Asian uye pfungwa chinoise.La kutsvaka zvinoenderana chaiwo ezvinhu riri shure mufashoni kuMadokero mumakore achangopfuura, asi haana rapera wenguva dzekare uye zvakasikwa hanya.
The ekunyebera kwesayenzi zvichemo zviri Geobiology (nokuda naErnst Hartmann, chiremba German akaberekerwa 1915 uye wakati ndiri chiremba uto panguva Second World War, imwe nguva apo nyika vakanakidzwa mumwe muedzo kuti musoro tsika) kunge zvimwe kubudirira mafashoni mumakore e80, anonyanya kutaura nezvezvinobatsira pamubhedha.
Sezvatatsanangurira kare, iyi checkerboard inoumbwa nemasvingo akasiyana asingaoneki masvingo. Apo maviri emasvingo aya anoparadzaniswa, chigumisiro chacho chinokanganisa kukanganisa pane zvose zviri munzira yayo.
Nokudaro, kana iwe ukazviwana uchinge uchingorara pasi peimwe yezviputi izvi, unenge uchinge uchinge uwedzere simba rako munguva yako yehope panzvimbo yekuwedzera mafuta. Izvo zvakafanana kana iwe uchishanda kana iwe ukatarisa terevhizheni kwemaawa akawanda, chaizvoizvo panzvimbo chaiyo apo kudarika kwakadaro kunonzi "HARTMANN NODES" kwaizove.
Nokudaro, apo chinzvimbo cheimwe yenharaunda idzi chinoshandiswa kune nzvimbo yemubhedha wako, zvinokwanisika kuona nzvimbo chaiyo iyo iyo kuyambuka inobata muviri wako. Inogona kuwanikwa pamapapu ako, pamutsipa wako, pane pepa rako kana chero imwe nzvimbo. Izvi zvinotevera, naizvozvo, kuti imwe nhengo inobatanidzwa zvakananga.
Isu tose tinoziva kuti tinopedza chikamu chetatu cheupenyu hwedu kurara, saka kuve kwakakosha kwekuchenjera kusarudza nzvimbo yemubhedha wedu. Zvisina kuwanikwa, kuisa kwepakati pedu kunokonzera kuputika kwemazamu emhepo kunokonzera imwe nhengo kusvika pakugadzira kushaya simba kunogona kuchinja zvishoma nezvishoma kuva chirwere chakakomba.
Mukuenzanisa, kana iri kuuya kune nzvimbo dzakagadzikana dzakadai sepamberi peTerevhizheni, daisi rebasa kana pamberi pekombiyuta, kunyanya kana tiri mugarisi kugara kwemaawa mazhinji, ichava nguva ino (kusiyana mune chinzvimbo chepamusoro) pahupenyu hwose tichatsvitswa.
Zviratidzo zvinosiyana kubva kune mumwe munhu kune mumwe, asi imwe kazhinji inoratidza hurumende yekuneta kwese iyo munhu asingakwanisi kubvisa.
Zviratidzo izvi, mushure mezvose, hazviiti sekutanga zvinotyisa. Zvisinei, kana izvi telluric nodes anowedzerwa zvimwe zvinhu zvakadai senzizi pevhu, zvavanokanganisa, makatsemuka, chicherwa mitaro etc., saka muna muzviitiko izvi, kuti nemigumisiro vari zvikuru zvakawanda ngozi utano hwako.
Kana zvatemwa kuti migumisiro yakaipa inowanikwa inozivikanwa nekuda kwemashoko aya, tinodana izvi "GEOPATHOGENIC EFFECTS". Maererano nezvidzidzo zvakakomba zvikuru, pamwe nekutsvaga kutevera, zvinoratidzika kuti izvi zvinoguma zvichingova zvirwere zvakakomba zvecarcinogenic pasi pe3 kusvika 5 zvishoma nemakore.
Kana iwe uchifunga kuti usiku hwako huri kurara nokuti:
Iwe unomuka kazhinji, kunyanya pakati peusiku na2 o'clock;
Iwe une dambudziko rakawanda rinorara rakarara kuti iwe unofanira kubuda pamubhedha mangwanani;
Paunomuka, zvifukidzo zvako zvinoratidza kuti pamwe wakafambisa zvakawanda munguva yako yehope;
Iwe uri nyore kukanganisa mumatambudziko uye dzimwe nguva unonzwa ucheche hunotyisa;
Dzimwe nguva unosangana nemasaisai mukati meusiku kana iwe unomukazve nekusimudzirwa kunoshamisa kwemoyo wako;
Asi kupfuura zvose, unonzwa kurwadziwa kwakanyanya pane imwe nzvimbo mumuviri wako usiku husiku.
Kudzivirira kubva pamhedzisiro inokuvadza yeanetaur simba
Sekudzivirira kana kudzivisa zvinokuvadza zvemasimba e telluric, mushure mekuongorora nzvimbo uye kuwana simba rinoparadza riripo,
- kuzviisa munzvimbo dzisingateereri umo simba rinokuvadza haringazviratidzi ivo pachavo, pasinei nebasa rinoita isu (kurara, kushanda, kuverenga / kutsauswa, ...), kana zvichibvira. Nokudaro, kunyanya kuisa / kutamisa midziyo yatinoshandisa uye mabasa edu kunze kwekuita kwesimba iri.
- nzvimbo dzezvinhu, neutralisers emhando iyi yemasimba (mabwe, mafomu, ...), mune nzvimbo dzinowanikwa ne geobiologist zvichida, kana zvikaoma kuwana nzvimbo dzisina kusimba uye saka kudzivisa zvinokonzerwa nemhando iyi yemasimba hunokuvadza.
- kuti nzvimbo yacho iongororwe nekugadziriswa kwekugara kweimba mune ramangwana uye makamuri umo munhu acharamba kwenguva yakareba (makamuri, imba yekurara, imba yokudyira, ...), asati atenga kana kuvaka imba, kuitira kuti kudzivisa nuisance nekuda kwemagetsi telluric angangosvika.
Iyo yakasununguka uye yakasununguka-kugunun'una kwevanhu vanoshandisa telluric energy ndeye 6'500-7'000 Angstroms (kana kuti mauniti eBovis).
Kuderera kunobva pasi kunonyaradza, kunoderedza, zvino kunouyisa matambudziko ehutano.
Kudengenyeka kwakasimba kunokurudzira, kunetseka, zvisote uye kupera.
Iyo cosmo-telluric yakakwirira nzvimbo
Pasi pezita iri rose, tinoshanyira nzvimbo dzose nesimba rakasimba cosmo-telluric energy.
Iyi ndiyo nzvimbo dzinofamba kupfuura 11 kana 13'000 B (Tibetan High Places), ona 18'000 (Christian Highlands, Chartres), Karnac, Pyramid yeGiza neMecca.
Nzvimbo idzi zviri pachena kuti hazvifananidzi kuitwa zuva nezuva.
Iyi ndiyo nzvimbo yekunyengetera, kufungisisa. Apo kudengenyeka kwakasimba kunobatsira.
Hazvisi pasina kuti nzvimbo idzi dzinoshumira senzvimbo dzekunamatira uye minyengetero kune zvitendero ...
Vanachiremba vanoona kuti cannabis inogona kuporesa uropi kana kenza yeprotate
African origin of reflexology
The Great Madhiri [Blu-ray]
Iyo yakasarudzika yakasikwa kana dzidziso yekubatana
Simba - Rakazere mwaka 1 kusvika 3 [DVD + Dhijitari kopi
"VaAfrica, ngatisimuke!": Hurukuro yakaitwa naPatrice Lumumba, Kurume 22, 1959
Kuisa mukushandisa simba pari zvino: Dzidziso dzakakosha, kufungisisa uye ...
Chakavanzika Chikuru, vhoriyamu 1
Nhoroondo Yese yeAfrica, Vhoriyamu 8: Africa kubvira 1935